Nyowani yeAirbus Imwe-Aisle Airspace kabhini inowedzera nyaradzo kuLufthansa ndege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nyowani yeAirbus Imwe-Aisle Airspace kabhini inowedzera nyaradzo kuLufthansa ndege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Lufthansa yakaitazve sarudzo yehunyanzvi uye kukwidza kwevatakuri, ichisimudza bhawa kune veruzhinji vanobhururuka kuti vazive nhanho-inotevera, Airbus inotungamira hunyanzvi hwekuumba.
Lufthansa inotanga kushanda nendege yayo yekutanga neIye-Aisle Airspace kabhini.
Vanopfuura makumi masere makumi matatu emaLufthansa eA80 majeti ekuti vagadziriswe new cabin.
Lufthansa inoramba ichitarisa zvakanyanya pachigadzirwa cheprimiyamu kune vashanyi vayo.
Lufthansa yatanga kushanda pamwe neayo yekutanga A320 Mhuri ndege - iyo A321neo - iine Airbus 'nyowani Imwe-Aisle Airspace kabhini. Mukuita kudaro, iyo ndege inova yekutanga opareta muEurope kuunza iyo nyowani yeMuchadenga kabhini maficha evatakuri vari mungarava A320 Mhuri ndege. Mu2018 Lufthansa Boka, yakareba-nguva A320 Mhuri mutengi, yakasarudza kushongedza zvinopfuura makumi masere makumi masere yendege yayo nyowani yeA80 Yemhuri paodha kubva kuAirbus neAirpace cabins.
Iyo nyowani yeMweya Space maficha anosanganisira: slimmer padivi pemapaneru enzvimbo yekuwedzera yemunhu nzvimbo padanho repafudzi; maonero ari nani kuburikidza nemahwindo ane avo akashandiswazve bezels uye akanyatsobatanidzwa ewindows shades; mabheji makuru epamusoro pemasaga makumi matanhatu muzana; iyo yazvino yakazara yakazara LED mwenje matekinoroji; LED-yakavhenekerwa 'nzvimbo yekupinda'; nenzvimbo nyowani nyowani dzine hutsanana dzisina kugadzikana uye nzvimbo inorwisa utachiona.
"Lufthansa akaita zvakare sarudzo yehunyanzvi uye kukwidza kwevatakuri, kukwidza bhawa kune veruzhinji vanobhururuka zvakanyanya kuti vazive chinotevera-chikamu, Airbus inotungamira huni hutsva ", akadaro Christian Scherer, Airbus Chief Commerce Officer uye Musoro weInternational. “Ndiri kufara kugamuchira mumwe wevashandi vedu venguva refu, Lufthansa, kuzova mushandi wekutanga weEuropean weA320neo Family Airspace kabhini. Handigoni kumirira kubhururuka pane imwe yendege idzi. ”
"Zvisinei nedambudziko, tinoramba tichitarisa zvine mutsindo pachigadzirwa chekutanga chevashanyi vedu," anosimbisa Heike Birlenbach, Musoro weCustomer Experience, Lufthansa Group. “Kwatiri, mubhadharo weprimiyamu unoreva kupa kwakakwirira-kwakasiyana, kwakasarudzika uye kwakakodzera kune vese vatinofamba navo nguva dzose. Tine Airspace Cabin nyowani, tiri kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwekufamba munzira pfupi-pfupi uye nekumisikidza chiratidzo cheindasitiri. "
Lufthansa yanga ichishanda iyo A320-mhuri kubvira ma1980 uye yave iri yekutanga mutyairi weA321 uye A320neo. Boka renhandare ndeimwe yevanonyanya kushandisa maAirbus pasi rese.
Pakupera kwaChikunguru 2021, iyo A320neo Mhuri yakanga yatambira zvinopfuura zviuru mazana manomwe nemazana mana kubva kuvanopfuura vatengi ve7,400 pasi rese.